Maalinta: Maarso 4, 2017
Koobka Adduunka ee Snowball ayaa ku bilowday Erciyes
Koobka Aduunka ee Barafka lagu ciyaaro wuxuu ka bilaabmayaa Erciyes: Marxaladda ugu dambeysa ee İstikbal FIS Snowboard World Cup, oo isku keeni doonta ciyaartooyda ugu guulaha badan adduunka, ayaa la qaban doonaa berrito. Kulan dhiirrigelin ah ayaa lagu qabtay Erciyes kahor horyaalnimada. [More ...]
Khadka tareenka ee u dhaxeeya labada magaalo ee Bolivia
Dawladda Bolivia waxay furtay khad gaadhaya 4.9 kiiloomitir masaafada u dhaxaysa La Paz iyo magaalada deriska la ah ee El Alto. Wadadani waa jidka ugu dheer ee u dhexeeya labada magaalo ee Bolivia [More ...]
Gawaarida dadweynaha ee Samsun iyo basaska yar-yar ayaa kordhay: Xarunta Iskuxirka Gaadiidka ee Samsun (UKOME) iyada oo ay go vehiclesaamisay gaadiidleyda magaalada 1,2,3 iyo 4 bas iyo bas yar oo gaar loo leeyahay. [More ...]
2023 ilaa tareenka ilaa 13 kun kilomitir
2023 sano 13 kun oo kilomitir oo jidadka tareenka si ay u bartilmaameed: 14 304 billion pounds sano ah oo ku qaataan gaadiidka Turkey, ayaa wuxuu qaatay share libaax ee 60 nidaamka tareenka billion pounds. Wadada Tareenka Caalamiga ah, oo ka bilaabaneysa Istanbul, Laydh [More ...]
Waxaa lagu sameeyay Shiinaha 'TSE dammaanad': Dadka 'lagu sameeyay Shiinaha' ayaa la sheegay inay tahay saadaalin taban; Shiinaha iyada oo ka faa iideysanaysa tayada iyo helitaanka qiimaha waxtarka leh ee alaabada iyo alaabada ceyriinka ah dhammaan heerarka adduunka [More ...]
Maareynta Saadka iyo Guddi Sharci ee Sharciga ah
Guddi ku saabsan Maareynta Saadka iyo Dhinacyada Sharciga: 3 waxaa la qabtay bishii Maarso 2017 iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Beykoz iyo Guddiga Sharciga ee Saadka iyo Gaadiidka Istanbul ee "Maareynta Saadka iyo Sharciga Qiyaasta Sharciga [More ...]
Maanta taariikhda: 4 Maarso 1873 Hirschin UM